Axmed Modoobe oo ka hor yimid baaqii mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Modoobe oo ka hor yimid baaqii mucaaradka
Axmed Madoobe iyo Siciid Deni, oo muddo xulufo siyaasadeed la ahaa mucaaradka ayaa hadda ka baxay safkii ay muddada ku jireen, waxayna u tafa-xeyteen boobka kuraasta.
MUQDISHO, Soomaaliya – Horjoogaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa qaaday tallaabo kale, oo sii kala fogeyneysa Golaha Midowga Musharixiinta iyo maamullada Puntland iyo Jubbaland, kadib markii uu ku dhawaaqay qabashada doorashada 14 kursi oo Golaha Shacabka ah.
Axmed Madoobe, wuxuu xilliyo ay xaaladdu ku adkeyd, garab siyaasadeed ka helay Mucaaradka Muqdisho ku sugan, waxayna musuul ka ahaayeen xalaaleynta doorasho muran ku jiray oo uu mar labaad Madaxweyne uga noqday Kismaayo.
Hayeeshee, ugu danbeyn, wuxuu si cad dhagaha uga fureystay baaqyada ka imaanaya Musharixiinta, ee ku aaddan in la hakiyo boobka doorashada iyo kuraasta shaqsiyaadka dooqan la soo siinayo.
Guddiga Maamulka Doorashada Dawlad Gobaleedka Jubbaland, ayaa xalay xilli danbe ku dhawaaqay lambarrada 14 kursi oo ka tirsan kuwa Golaha Shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee JFS, waana maalin kadib markii Midowga Musharixiintu ku dhawaaqeen Shir weyne looga arrinsanayo aayaha dalka.
Warka ka soo baxay Guddiga SEIT-ka Jubbaland, ayaa ku soo aadaya xilli saacado ka hor, qoraal ka soo baxay Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal FEIT, horjoogayaasha maamullada lagu faray in ay si deg deg ah u guda galaan howlaha doorashooyinka.
Mucaadku waxaa ay hore u sheegeen in ay u caddaatay in aysan jirin cid xil iska saaraysa Joojinta boobka doorashada iyo taaba gelinta tallaabooyinka lagu saxayo, sidaas daraaddeed ay hor kici doonaan hirgalinta hannaan xalaal ah oo la isla oggol yahay.
Axmed Madoobe iyo Siciid Deni, oo muddo xulufo siyaasadeed la ahaa mucaaradka ayaa hadda ka baxay safkii ay muddada ku jireen, waxayna u tafa-xeyteen boobka kuraasta, xilli horjoogaha Bari iyo Nugaal uu u diyaar garoobayo u baratanka kursiga ugu sarreeya dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa hore dhagaha uga fureystay baaqa Musharixinta ee ku aaddan hakinta doorashada, Madoobe ayaa isna jidkaas qaaday, halka Dini uu dhawaan ku dhawaaqi doono dooqashada ku dhawaad 10 kursi oo taalla Garowe.